Kapet Ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Kapeeti Office, Vinyl flooring, ịkwanyere ala - JW
RUG omenala aka
PP Graphic na PVC azụ-Omuma Otu
Ihe eserese PP nwere PVC azụ-Traza SQ
Eserese naịlọn nwere PVC azụ -Park Okporo ụzọ
Usoro akpa akpa Rug 199
Usoro akpa akpa Rug 123
Usoro akpa akpa Rug 113
Ngwaahịa anyị niile na -enyocha nyocha nke ọma na ogbe ọ bụla.
Anyị nwere ndị otu ọkachamara nwere ahụmịhe na ahụmịhe
anyị na-agba njikwa mma atọ maka ma ngwaahịa ma nke na-abụghị nke ngwaahịa.
Guzosie ike na 2013, JW kapeeti na flooring Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na -emekọ ihe ọnụ nke edebara aha na Shanghai, China. Akụkụ azụmaahịa bụ isi na-ekpuchi kapeeti, ala na ihe ụlọ ndị ọzọ, na-eje ozi ụlọ oriri na nkwari akụ kpakpando, ụlọ ọfịs ọkwa A, ụlọ dị elu na ebe obibi. Ọ na-abịa na kapeeti ejiri aka mee, akpa akwa Axminster, kapet Wilton, kapet e biri ebi, yana ọtụtụ taịlị kapeeti, SPC vinyl pịa plank nwere nkwado dị nro, ngwa kapeeti, wdg.
OZI zuru oke
Anyị na -edobe ngwaahịa na taịlị kapeeti 9, ọkwa vinyl abụọ, 1 kapeeti nylon ebipụtara.
Ihe na -erughị otu izu maka ngwaahịa ngwaahịa.